Uyenza njani iBhanari yeYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 358
Ukufunda ukwenza isiteshi sakho seYouTube kubaluleke kakhulu ukuba sifuna ukukhula ngaphakathi kweqonga levidiyo elidumileyo. Ukuba ucinga ngokuzinikezela ngokupheleleyo kwindalo yokuqulatha umxholo kufuneka ukuba ube nejelo eliyilwe kakuhle ukuze.
Kwinqaku lethu ku Namhlanje siza kukubonisa iingcebiso ezifanelekileyo eziza kukunceda wenze ibhena efanelekileyo yesitishi sakho se-YouTube. Okwangoku kukho izixhobo ezahlukeneyo ezinokukunceda uyile eyona ibhena ibhanile, kwaye apha siza kuchaza ezinye zazo.
Le yeyona nto iphambili ekufuneka siyazi ngaphambi kokufunda ukuba ungayenza njani ibhena yeYouTube. Xa sithetha ngegama elithi "isibhengezo" sibhekisa kuhlobo lomfanekiso oqaqambileyo osebenza ekuchongeni ijelo elithile.
Isibhengezo sibonakalisiwe, phakathi kwezinye izinto, ngokobukhulu bayo obumangalisayo. Olu lolunye umahluko ophambili xa kuthelekiswa nefoto yeprofayile okanye uphawu oluhlala lincinci kwaye luchanekile ngakumbi. Isibhengezo siphezulu kumjelo wethu.
Ibhanki eyenzelwe kakuhle inokuba yinto efanelekileyo yokubambisa ababhalisi abatsha kwisitishi sethu. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ufunde ukuba ungayenza njani eyantlandlolo, eyothusayo nenomdla eluntwini. Ngale ndlela siya kuphumelela ekubekeni uphawu lwethu olungcono.
Sonke sinokuba nesibhengezo sethu
Kukho abo bajonga ukuba ukwenza ibhanna ngumsebenzi kuphela kwiimveliso zeshishiniNangona kunjalo, sonke sinokubakho. Abantu banokuba nophawu lobuqu kwaye kufuneka sichithe ixesha kuyo ukufezekisa ukukhula kwixesha eliphakathi nelide.
Ukuba unejelo lobuqu ngaphakathi kuYouTube kubalulekile ukuba uqale ngokufaka nganye izinto echonga uphawu lwakho, umzekelo:
Uyenza njani eyona ibhena ibhanile
Xa usenza eyona ibhena yeYouTube, kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo izinto ezininzi eziphambili, kubandakanya nokucinga kwethu kunye nobuchule bokuyila.. Masingakulibali ukuba ukwenza ibhena ngumcimbi woyilo, ke ubuchule bokuyila kubalulekile.
Kukwabalulekile ukukhetha inkqubo yoyilo elungileyo okanye usetyenziso. Ngethamsanqa kwiwebhu sifumana ezinye iindlela ezininzi, ezinye zazo zisimahla. Zama uku khetha usetyenziso olunikezela ngeetemplate esele zenziwe, apho kufuneka uguqule kuphela iinkcukacha ezincinci.
Kubalulekile Khathalela ubukhulu bebhanile yethu YeYouTube. Khumbula ukuba kuxhomekeke kwisixhobo esikubonayo yindlela ibhanile yakho eya kujonga ngayo. Kukwasisiseko sokwazi ukuba ulusebenzisa njani uhlobo lombala, ifonti kunye nobungakanani bemifanekiso oza kuyifaka kwibhena yakho.
Ngaba unokubeka ezinye amagama achaza itshaneli yakho. Ke abantu baya kuba nesishwankathelo esifutshane semixholo oyiphuhlisayo kumxholo wakho kwaye banokubhalisela kwimeko apho baziva betsala.
Amanyathelo okulayisha ibhena kwi-YouTube
Yenza nqakraza malunga nomfanekiso wakho weprofayili
Iindawo icandelo loyilo kwaye ulayishe ibhena oyilungiselele ijelo lakho.
1 Yintoni ibhena?
2 Uyenza njani eyona ibhena ibhanile
3 Amanyathelo okulayisha ibhena kwi-YouTube